Daawo Sawirro: Dadka miyiga Somalia ugu dhimanaya abaaraha iyo cudurada ka dhashay oo sii kordhaya! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Dadka miyiga Somalia ugu dhimanaya abaaraha iyo cudurada ka dhashay oo sii kordhaya!
Daawo Sawirro: Dadka miyiga Somalia ugu dhimanaya abaaraha iyo cudurada ka dhashay oo sii kordhaya!
Abaaraha ku dhuftay degaanada miyiga ah ee gobolada dalka ayaa yeelanaya maalinba maalinta ka dambeysa saameyn fool xun oo ay ku yeelanayaan dadka iyo duunyada.
Xaaladdo aad u liita ayaa laga soo sheegayaa gobollada Bay iyo Bakool, halkaasoo shalay dowladda Somalia ay ku dhawaaqday in in ka badan 100 qof ay ugu dhinteen cuddurro ay sababeen abbaaraha ka jira gobolladaasi.
Sidoo kale deganada xaaladooda laga deyrinayo waxaa ka mid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya oo abaaruhu intay laayeen xooihii intooda badan haatan dadkii ku noolaa ay bilaabeen iney u dhintaan gaajo iyo haraad.
Dhulka fog fog ee miyiga ah ayaa waxaa maalin walba laga soo helayaa raqda dad iyo xoolo u dhintay abaarta taagan oo lagu tilmaamay iney ka mid tahay kuwi ugu xumaa ee soo mara geeska Afrika.
Waxaa socda gurmadyo qeybaha bulshada, dowlada iyo heyaddaha samafalka qaarkood ugu gurmanayaan dadka abaaruhu saameeyeen balse abaaraha oo noqday kuwo meel walba saameeyey ayaa gurmadyadaas ka dhigay dhibic biyo ah oo ku dhacday dhul ooman.
MUUQAALKA KAALMAY KUWAAN HALKAAN HOOSE KADAAWO
Previous PostBaarlamaanka Soomaaliya oo Mooshin ka diyaarinaya Xiisada Berbera + (Warbixin) Next PostMadaxweyne Farmaajo oo booqashadii u horeysay ku tagaya mid ka mid ah dalalka deriska!!